Uma maleynayo in suuqgeyntu ay tahay lacag sameynta | Martech Zone
Haddii ay jiraan laba erey oo aan ku arko warshaddan oo iga dhigaysa inaan taaho oo aan iska tago, waa weedha samaynta lacagta. Ma doonayo inaan galo siyaasada beryahan dambe, laakiin shirkad ayaa go aan qaadatay si ay u bilawdo olole suuqgeyn muran dhaliyay. Mid ka mid ah asxaabteyda ayaa sheegay inuu ahaa suuq geyn fiican maxaa yeelay waxay ka sameyn doontaa iyaga tan lacag ah.
Eeg, iyagu waa shirkad waxayna ku samayn karaan wax kasta oo ay jeclaan lahaayeen suuq geyntooda. Iyo ku boodista muran caan ah waxay u fiicnaan kartaa indhaha indhaha iyo xitaa calaamadaha dollarka. Laakiin ma aaminsani in hadafka suuq geyntu tahay in lacag la helo. Waxaan la shaqeeyey shirkado badan oo dhammaantood ku saabsanaa lacag sameynta, oo ama way silcayaan ama dhimanayaan - maxaa yeelay lacag sameynta ayaa ahayd cabirka ugu muhiimsan.
Wargeysyada - Waxaan u shaqeeyey wargeysyo iyagu kaligood ku leh xayeysiinta isla markaana sii waday sarre u kacaya qiimahooda. Warku wuxuu noqday "buuxiyaha inta udhaxeysa xayeysiinta". Markii tartanku ka yimaado khadka tooska ah, macaamiisha iyo xayeysiiyayaashu ma sugi karin inay markabka ka boodaan.
SaaS - Waxaan u shaqeeyay qaar ka mid ah Software-ka ugu waaweyn anigoo ah adeeg bixiyeyaasha warshadaha. Qiirada ay u leeyihiin in ay garaacaan yoolalka rubuc kasta, waxaan ku daawaday iyaga oo macaamiil shmooze ah ka dibna u wareejiyay macmiilka xiga ee muhiimka ah. Markii ay aasaasayaashu bilaabeen mustaqbalkooda bilowga, macaamiishaas duugga ah kama aysan jawaabin taleefanka. Oo markii xalal cusub la helay, macaamiisha la iloobay ayaa haajiray.
Sameynta lacagtu waa himilo muddo-gaaban ah oo ka saareysa diiradda wax kasta oo lagama maarmaan u ah dhisida ganacsi kobcaya. Lacagtu waa waxa ay isku dhaafsadaan shirkad iyo macaamiisheeda qiimaha ay keeneen. Lacagtu waa muhiim - lacag aad u fara badan ayaa laga yaabaa in macmiilkaagu dareemo inuu jeexan yahay oo uu baxayo. Haddii aadan lacag kugu filan bixin, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad si habboon ugu adeegto macmiilka. Lacagtu waa isbeddel… laakiin dhisidda xiriir adag waa waxa muhiimka ah.
Suuqgeyntu waxay door ka ciyaartaa isku dayga ah in la helo, la aqoonsado, lana bartilmaameedsado macaamiisha mustaqbalka u baahan alaabtaada ama adeeggaaga oo u eg macaamiishaada ugu fiican. Toddobaad kasta waxaan ka fogaadaa heshiisyo aan aaminsanahay inaanan ku habbooneyn inaan la shaqeeyo shirkadda. Shirkadaha qaarkood xitaa way ka xanaaqsan yihiin inaanan caawin doonin - laakiin waan ogahay in ujeedada muddada-gaaban ee samaynta lacagta ku dhowaad burburin ganacsigeygii hore. Markii aan helay macmiilkii saxda ahaa, oo aan u sabray inaan la shaqeeyo, dejiyo waxyaalo ku habboon, oo la ii xaqiijiyey inay u baahan yihiin oo ay doonayaan alaabtayda iyo adeegyadayda… waa markaan dhisnay xiriir.
Aan tusaalooyin dhawr ah halkaa ka soo qaato:
Waxaan caawinayaa a shirkada lacag aruurinta taas oo lashaqeysa iskuulada hada. Waxay leeyihiin koritaan aan caadi aheyn labadii sano ee la soo dhaafay oo aan caawinayay - laakiin waa sababta oo ah waxay si xoog leh diiradda u saareen cidda dugsiyada saxda ah ay tahay inay la shaqeeyaan. Waxay ka fogaadaan inay ka shaqeeyaan iskuulada halka ay wax soo saarkoodu sababi karo isku dhac u dhexeeya ardayda… taa badalkeedana, waxay ka taageeraan iskuuladaas deeqdooda. Lacag ma ku heli karaan markay wax u iibiyaan? Dabcan… laakiin way ogyihiin inaysan dan ugu jirin dugsiga.
Waxaan caawinayaa a shirkadda xarunta xogta yaa hal abuur leh oo madax banaan. Waxay ku kasban karaan lacag iyagoo iibinaya waxqabadyo yar yar sanadka oo dhan… aad ayey uga faa'iideystaan ​​muddada gaaban. Si kastaba ha noqotee, way ogyihiin in macaamiisha waaweyn, shirkadaha leh caqabadaha u hoggaansamida ay yihiin halka ay ka iftiimaan. Marka, waxay u suuq geynayaan ganacsiyada waaweyn kana fogaadaan suuqgeynta shirkadaha yar yar.
Waxaan caawinayaa a adeegyada guriga ganacsi sameeya saqafka, dhinacyada, iyo adeegyada kale ee bannaanka. Waxay yihiin ganacsi qoys oo ku dhowaad 50 sano bulshada dhexdeeda ah. Tartankoodu wuxuu sameeyaa ballanqaadyo wuxuuna ka tagayaa raadad wax ku ool ah oo wax ku ool ah adoo adeegsanaya iibinta gacan culus oo ku riixaya macmiil kasta inuu ku dhow yahay ama ku xumaado. Macaamilkeygu wuxuu doortaa inuu ka fogaado kaqeybqaadashadaas iyo, bedelkeeda, suuq u geeyo asxaabta, qoyska, iyo deriska macaamiishooda.
Waxaan caawinayaa a baaritaanka biyaha ganacsi ujeeddadiisa koowaad ahayd inay ka caawiso macaamiisha tijaabinta tayada biyaha xirmooyinka guryaha. Si kastaba ha noqotee, waxay aqoonsadeen arrin aad u ballaadhan oo aan degmooyinku haysan barnaamijyo raadin si ay si buuxda ugu hoggaansamaan xeerarka maxalliga ah, gobolka, iyo federaalka. Waxay ogaayeen inay saameyn badan ku yeelan karaan hadafkooda ah inay gacan ka geystaan ​​wax ka beddelka tayada biyaha dalka haddii ay ku tiirsan yihiin oo ay muddada dheer ku fooganaayeen qandaraasyada dowladda.
Xaaladahan oo dhan, ma fiirineyno lacag. Dadaalladeenna suuq-geynta ayaa ah in aan wanaajino oo aan is waafajino wax soo saarka iyo adeegyada ganacsiyada aan ka caawinno macaamiisha mustaqbalka ee ay u adeegi karaan Dhammaan shirkadahaani waxay leeyihiin koboc weyn, laakiin waa sababta oo ah waxay garanayaan goorta ay tahay inay ka jeestaan ​​inay lacag helaan ... ma daba socdaan.
Suuq kasta wuxuu caawin karaa shirkad lacag. In yar oo suuqleyda ah ayaa ka caawiya ganacsiyada inay barwaaqoobaan oo ay la koraan macaamiisha qadarinaya wax soo saarkooda iyo adeegyadooda. Tobankii sano ee la soo dhaafay aniga oo leh ganacsigeyga, waxaan ogaaday in lacagtu dhab ahaan ku timaado helitaanka iyo la shaqeynta macaamiisha saxda ah. Suuqgeynteydu waa inaan raadsado shirkadahaas, ma ahan inaan raadsado oo lacag sameeyo. Waxaan rajeynayaa inay taasi diiraddaada tahay sidoo kale.
Tags: samaynta lacagtamarketinglacag